ရာသီဥတုနှင့် ရာသီဥတုအကြား ကွာခြားချက်များ- ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် သိချင်စိတ်များ | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 16/06/2022 11:05 | မိုးလေဝသ
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်နှင့်အမျှ မတူညီသောမီဒီယာများတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရာသီဥတုနှင့် ရာသီဥတုအကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။ လူတော်တော်များများက ဒီသဘောတရားတွေကို ရောထွေးပြီး ဘာလဲဆိုတာကို အတိအကျ မသိကြပါဘူး။ ရာသီဥတုနှင့် ရာသီဥတု ကွာခြားချက်.
ထို့ကြောင့် ဤဆောင်းပါးတွင် တည်ရှိနေသော ရာသီဥတုနှင့် ရာသီဥတုအကြား အဓိကကွာခြားချက်များနှင့် ၎င်းတို့တစ်ခုစီ၏ လက္ခဏာရပ်များကြားတွင် အဘယ်အရာများ ကွာခြားသည်ကို သင့်အား ပြောပြပါမည်။
1 ရာသီဥတုနှင့် ရာသီဥတု ကွာခြားချက်များ
3 ရာသီဥတုနှင့် ရာသီဥတုအကြား ခြားနားချက်များကို အမှတ်အသားပြုသည့်အချက်များ
5 ရာသီဥတုကို တိုင်းတာရန် မိုးလေဝသ ကိရိယာများ
၎င်းတို့၏ အယူအဆများသည် နီးစပ်သော်လည်း ရာသီဥတုနှင့် ရာသီဥတု ဟူသော ဝေါဟာရများကို အပြန်အလှန် အသုံးမပြုနိုင်ပေ။ ၎င်းတို့ကို ခွဲခြားပြီး ကွဲပြားစေသည့် အခြေခံ ခြားနားချက်တစ်ခု ရှိသည်။ အချိန်စက်ဝိုင်းများ.
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရာသီဥတုအကြောင်းပြောသောအခါ၊ အချို့သောဧရိယာရှိ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ သို့မဟုတ် ဖိအားကဲ့သို့သော လေထုအခြေအနေများကို ရည်ညွှန်းပြီး အချိန်တိုတောင်းပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များကို ကြည့်သောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် ရာသီဥတုအကြောင်းမဟုတ်ဘဲ ရာသီဥတုကို ပြောဆိုနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ဖက်မှာလည်း ရာသီဥတု၊ ဤတူညီသော လေထုတန်ဖိုးအားလုံးကို ရည်ညွှန်းသည်။သို့သော် ဧရိယာတစ်ခုတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ပျမ်းမျှအားဖြင့်။ ထို့ကြောင့် ဥပမာအားဖြင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် နှစ်များတစ်လျှောက် စုဆောင်းထားသော မှတ်တမ်းများနှင့် အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ ရာသီဥတုကို ရေရှည်ရာသီဥတုစာရင်းအင်းအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် 30 နှစ်. ရာသီဥတုကို တိုင်းတာရန်အတွက် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ၎င်း၏ဒြပ်စင်ပြောင်းလဲမှုများကို ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ ရာသီဥတုစနစ်အား ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းငါးခုဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ ရာသီဥတု၏ အစိတ်အပိုင်းများမှာ-
မြေမျက်နှာသွင်ပြင် သို့မဟုတ် အသီးအရွက်များကဲ့သို့ ၎င်း၏ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းတရားများကြောင့်လည်း ရာသီဥတုကို ထိခိုက်ပါသည်။
ရာသီဥတုနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အချက်ငါးချက်ရှိပါတယ်။
လေထုအပူချိန် အမည်ဖော်ပြသည့်အတိုင်း လေသည် သတ်မှတ်အချိန်နှင့် သတ်မှတ်သည့်အချိန်တွင် မည်မျှပူသည်ဖြစ်စေ အေးသည်။ ၎င်းသည် ဂြိုဟ်နှင့် ပထဝီဝင်အပေါ်မူတည်၍ မြင့်မားသော သို့မဟုတ် နိမ့်ကျစေမည့် နေရောင်ခြည်မှ အဓိက လွှမ်းမိုးထားသည်။ လေထုအပူချိန်နှင့် မိုးရွာသွန်းမှုသည် ရာသီဥတု၏ အရေးကြီးဆုံးဒြပ်စင် နှစ်ခုဖြစ်သည်။
မိုးရွာသွန်းမှု- ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်သို့ ကျရောက်သော လေထုအတွင်းရှိ တိမ်များမှ ရေများ ပါဝင်သည်။ မိုး၊ နှင်းနှင့် မိုးသီးများသည် မိုးရွာသွန်းမှုပုံစံများဖြစ်သည်။
လေထုဖိအား: ၎င်းသည် လမ်းကြောင်းအရပ်ရပ်ရှိ လေထုမှ ထုတ်ပေးသော အလေးချိန်ဖြစ်သည်။ အမြင့်ပေ မြင့်လေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အထက်တွင် လေနည်းသောကြောင့် ဤအလေးချိန် လျော့နည်းလေဖြစ်သည်။ အပူချိန်သည်လည်း လေကို ချဲ့ထွင်ပြီး သိပ်သည်းဆကို ဆုံးရှုံးစေသည်၊ ထို့ကြောင့် အမြင့်နှင့်အမျှ အပူချိန်မြင့်လေလေ ဖိအားနည်းလေဖြစ်သည်။
လေ လေထုသည် လေထုအတွင်း ရွေ့လျားမှုဖြစ်သည်။
စိုထိုင်းဆ: နောက်ဆုံးတွင်၊ ရာသီဥတု၏ဒြပ်စင်များထဲမှတစ်ခုသည် အငွေ့အသွင်ဖြင့် လေထုအတွင်းရှိ ရေပမာဏဖြစ်သည့် လေထုစိုထိုင်းဆဖြစ်သည်။
တိမ်ဖုံး- အဲဒါက တိမ်တွေနဲ့ လေထုထဲက တိမ်တွေရဲ့ ပမာဏနဲ့ ပတ်သက်တယ်။
ရာသီဥတုနှင့် ရာသီဥတုအကြား ခြားနားချက်များကို အမှတ်အသားပြုသည့်အချက်များ
ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ခြင်းတွင် အဓိက အချက် ၆ ချက်ရှိသည်။
လတ္တီတွဒ်: ပေးထားသောအမှတ်နှင့် ကမ္ဘာ၏ အီကွေတာကြားရှိ ထောင့်ကွေးအကွာအဝေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဧရိယာအတွင်း အပူပြင်းပြင်းနှင့် နေ့ရောညပါ ကြာချိန်ကို သက်ရောက်စေသည့် နေရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှု ဖြစ်ပွားမှုထောင့်ကို သက်ရောက်သည်။
အမြင့်: သတ်မှတ်ထားသောအမှတ်နှင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကြား ဒေါင်လိုက်အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ မြင့်မားသော အမြင့်သည် အမြဲတမ်း အပူချိန်နိမ့်ခြင်းနှင့် ဖိအားများ လျော့နည်းခြင်းတို့ကို ဆိုလိုသောကြောင့် ရာသီဥတုအပေါ် ကြီးမားသော သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အပူကြမ်းခင်းကို အမြင့်ပေဖြင့် ပေးထားသည်။
ပင်လယ်နှင့်အကွာအဝေး ရေထုကြီးများ၏ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် တိုက်ကြီးမျက်နှာပြင်များထက် အပူကို ကြာရှည် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းကြောင့် ၎င်းမှာ အရေးကြီးပါသည်။ သမုဒ္ဒရာနှင့် ဝေးကွာသော ဒေသများတွင် ၎င်းတို့သည် သမုဒ္ဒရာ၏ ချောမွေ့သောအကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိသောကြောင့် မြင့်မားသော အပူလှိုင်းများရှိသည်။
သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းများ ၎င်းတို့သည် အနည်းနှင့်အများ ပူသောနေရာများမှ ရေအများအပြားကို သယ်ဆောင်လာသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ပိုက်များ သို့မဟုတ် ရေတိုင်ကီ သို့မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာ၏ အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။
မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အနေအထား- ဧရိယာသည် နေသာသည်ဖြစ်စေ၊ အရိပ်ဖြစ်စေ နှင့် နေရောင်ခြည်မည်မျှလက်ခံသည်ကို အမှတ်အသားပြုပါ။
ဂြိုလ်လေတိုက်နှုန်းနှင့် ရာသီလေများ ရာသီဥတုဆိုင်ရာအချက်များအကြောင်းပြောသောအခါတွင် သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းများနှင့် ဆင်တူသော လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသည့် လေထုအမြောက်အမြား ရွေ့လျားခြင်း၊ အပူချိန်နှင့် မုန်တိုင်းများ သို့မဟုတ် အခြားသော လွှမ်းမိုးမှုများနှင့်အတူ လေကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ရာသီဥတုသည် သတ်မှတ်နေရာနှင့် အချိန်အတွင်း ဤလေထုဆိုင်ရာအချက်များအားလုံးကို ရည်ညွှန်းသည်။ မနက်ဖြန် မိုးရွာမလား ဒါမှမဟုတ် နေသာမလား ဒါမှမဟုတ် ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က အရမ်းအေးရင် ပြောတဲ့အခါ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် ဒါမှမဟုတ် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေမှာ မြင်နေရတာပါပဲ။
ရှေးယခင်ကတည်းက အချိန်ကို နက်နက်နဲနဲ လေ့လာခဲ့သည်။ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အဲဒါကို ပိုသိလေလေ၊ ရာသီဥတုကို ပိုတိတိပပ သိလေလေမို့၊ အဲဒါကို ခန့်မှန်းဖို့ ကိရိယာတွေ များလေလေပါပဲ။ ရာသီဥတုကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုသည် လူသားများအတွက် အမြဲအရေးကြီးပါသည်။ သင်၏အခြေခံအကျဆုံး စိုက်ပျိုးရေးအသုံးချမှုမှ အစီအစဉ်တစ်ခု၊ ခရီး သို့မဟုတ် ပွဲတစ်ခုပြင်ဆင်မှုအထိ။
ရာသီဥတုကို တိုင်းတာရန် မိုးလေဝသ ကိရိယာများ
ရာသီဥတုနှင့် ရာသီဥတုအကြား ခြားနားချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်သဘောပေါက်ရန် ပြီးပြည့်စုံရန်၊ နောက်ဆုံးအကြောင်း အနည်းငယ် ထပ်ပြောရန်လိုပါသည်။ အချိန်ကို တိုင်းတာပြီး ရာသီဥတု သို့မဟုတ် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်များကို ပြုလုပ်သည့် မိုးလေဝသ ကိရိယာများအကြောင်းလည်း သိရန် အရေးကြီးပါသည်။
သာမိုမီတာ: ၎င်းသည် နေရာတစ်ခု၏ လေထုအပူချိန်ကို သတ်မှတ်ထားသော အချိန်တစ်ခုတွင် တိုင်းတာရန် ခွင့်ပြုသည်။ ဤသည်မှာ ဧရိယာတစ်ခု၏ အမြင့်ဆုံး၊ ပျမ်းမျှနှင့် အနိမ့်ဆုံး အပူချိန်ကို မည်သို့သိရှိနိုင်မည်နည်း။
လေနုစက် လေတိုက်နှုန်းကို တိုင်းတာပါ။
Pluviometer- ၎င်းသည် မိုးရွာသွန်းမှု၊ မိုးသီးနှင့် နှင်းကျမှုကို တိုင်းတာသည်။
ဗန်း- လေ၏ ဦးတည်ရာကို သိရန် ကူညီပေးသည်။
ရာသီဥတု နှင့် ရာသီဥတု ဆိုသည်မှာ လေထု၏ လက်ရှိ သို့မဟုတ် လက်ရှိ အခြေအနေ ကို နာရီ နှင့် နေ့စဥ် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ရန် သုံးသော ဝေါဟာရများ ဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း (မိုးလေဝသ) ရာသီဥတု ဆိုသည်မှာ လေထု၏ လက်ရှိအခြေအနေ၊ ရာသီဥတုသည် ဆယ်စုနှစ် သုံးခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ပြောင်းလဲမှုများကို ရည်ညွှန်းသည်။
ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု ဆိုသည်မှာ အချိန်နှင့် ရာသီဥတု စကေးအလိုက် မတူညီသော အချိန်နှင့် ရာသီဥတု စကေးများပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ရာသီဥတု အလိုက် အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ စကေးများ အားလုံးရှိ အခြားသော ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက် အပြောင်းအလဲများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် ရာသီဥတုနှင့် ရာသီဥတုအကြား ခြားနားချက်များကို ပိုမိုသိရှိနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုနှင့် ရာသီဥတု ကွာခြားချက်များ